Stirista dia manome ny mari-pamantarana vaovao miaraka amin'ny angon-drakitra | Martech Zone
Stirista Powers ny mari-pamantarana azy vaovao miaraka amin'ny angon-drakitra tena izy
Alakamisy, Jolay 22, 2021 Alatsinainy, Jolay 26, 2021 Douglas Karr
Ireo mpanjifa dia mividy amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny solo-sainanao, mitsidika pejy iray amin'ny takelaka hafa amin'ny takelaka iray, mampiasa finday avo lenta handefasana momba izany amin'ny media sosialy ary avy eo mivoaka ary mividy vokatra mifandraika amin'izany amin'ny foibe fiantsenana akaiky.
Ny tsirairay amin'ireto fihaonana ireto dia manampy amin'ny fampivoarana mombamomba ny mpampiasa feno, saingy sombim-pahalalana samy hafa avokoa izy rehetra, maneho ny isam-batan'olona. Raha tsy ampidirina izy ireo dia mijanona ho kinova misaraka aminao amin'ny adiresy ara-batana, ID Device, mpivarotra an-tserasera, magazay an-tserasera, pejin-tranonkala atiny, fitaovana finday, solosaina finday, fahitalavitra mifandray, ary refy hafa ifandraisanao.
Ny mpampitohy maharitra toy ny adiresy mailaka - matetika nidina ho an'ny tsiambaratelo - na ny fitaovana iray dia afaka mampivondrona ireo sombin-drakitra samihafa, mamorona tabilao mombamomba azy izay maneho ny fomba fijery iray manontolo momba ny tokantrano na olona iray ahafahan'ny mpivarotra mikendry tsara kokoa ny fampielezan-kevitr'izy ireo hifandraika amin'izany. mpijery.
Ankoatry ny fanangonana sy fampiraisana ireo angona rehetra ireo, ny fanamby lehibe indrindra amin'ny kisarisary maha-izy azy dia ny fitazonana azy ankehitriny. Miaraka amin'ireo mpampiasa mifampiresaka tsy tapaka mandritra ny andro, mora ho an'ny data haingana ho lany daty sy tsy marina.
Saingy ankehitriny, ny mpamatsy serivisy marketing tarihan'ny data Stirista dia nanandratra ny lohalaharana, niaraka tamin'ny sary voalohany misy ny tena izy eo amin'ny tsena.
Na dia havaozina isaky ny 30 na 90 andro aza ny ankamaroan'ireo sary, ny OMNA Identity - misarom-boaly nataon'i Stirista tamin'ny volana aprily - manavao isaky ny segondra.
Izany famelomana fotoana izany ny data momba ny mombamomba ny mpampiasa dia tsy lafo intsony fa ilaina. Ny fifandraisan'ny mpampiasa dia asan'ny mivantana ny maha-marina ny angon-drakitra, ary ny singa fototra iray amin'ny maha-marina dia ny fihavaozan'ny data.
Manohy mandre avy amin'ireo mpivarotra sorena izay nampanantenaina ny fidirany amin'ny angona antontam-baovao momba ny mpanjifa tena izy vao hahalala fa ny ankamaroan'ny ampiasain'izy ireo hifandraisany amin'ny mpanjifa sy ny vinavinany dia angon-drakitra tsy marina. Stirista dia nitondra ny tsena OMNA, ilay mari-pahaizana momba ny fotoana tena izy, izay havaozina ho faharoa ary manome ny orinasa ny hevi-baovao ilain'izy ireo hahafantarana tsara kokoa ny ankohonany lasibatra - ny toerana iasan'izy ireo, ny fomba ampiasany ny volany, ny fitaovana ampiasainy ary ny ireo toerana notsidihin'izy ireo tamin'ny fomba azo antoka momba ny fiainana manokana.
Ajay Gupta, tale jeneralin'ny Stirista
Voalohany, miova haingana ny angona mpampiasa. Ny adiresy an-dalambe, ny fananana fitaovana, ny angona mividy na ny fampahalalana hafa dia manampy amin'ny famaritana olona na tokantrano amin'ny fomba mifanaraka amin'ny tsiambaratelo. Eritrereto fotsiny hoe impiry isan'andro ianao no misafidy safidy vaovao momba ny fijerena atiny, fijerena programa, fividianana zavatra, na fitsidihana any amin'ny toerana misy anao.
Faharoa, ny tontolon'ny tena izy amin'ny fanatrarana olona na tokantrano misy hafatra mifandraika amin'izany dia miova haingana ihany koa. Ny tena manamarika azy dia nanjavona ny cookie an'ny antoko fahatelo, ary ny fahaizana mikendry na manome doka amin'ny fitaovana finday dia mihasarotra hatrany. Milatsaka ny dokam-barotra TV Linear, satria mifindra amin'ny loharanom-pahalalana hafa ny mpijery.
Ary ny lalàna vaovao sy ny fahatsiarovan-tena momba ny tsiambaratelon'ny mpampiasa dia nahatonga ny faneken'ny mpampiasa sy ny anarana tsy fantatra anarana ho ivon-toerana lehibe amin'ny fanangonana data na ny fitantanan-tena.
Ny OMNA dia mamolavola ny fifandraisana an'arivony tapitrisa izay manondro mpamaritra 500 isaky ny mombamomba. Raha te hitrandraka eo ambanin'ny Kisary Identity feno ny mpivarotra dia afaka miditra amin'ireo sary mifampitohy izy ireo: mihoatra ny 90 tapitrisa ny tokantrano amerikana ao amin'ny IP Graph, mihoatra ny 1 miliara ireo fitaovana mifandraika ao amin'ny Device Graph, ary ny angona momba ny tanjon'ny toerana sy ny hetsika izay mitohy. nohavaozina tamin'ny kisary toerana.
Ny Fitaovana afovoany
Araka ny tsapan'ny ankamaroan'ny mpivarotra, ny data avy amin'ny cookies an'ny antoko fahatelo dia tena tsy marina mihitsy, ary nampizarazara ny olona ho lasa lamina fitetezana nomerika na fifandraisana eo amin'ny fampiharana finday izay tsy voatery hita taratra ny tombotsoany feno.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny antontan'isa voalohany sy faharoa izay mamorona ny atin'ny kisary maha-izy azy toa ny OMNA an'i Stirista dia mitombina sy tena marina. Amin'ny maha fampidirana isan-karazany azy ny tena data, ny sary tahaka izany dia manome sary feno kokoa momba ny tombontsoan'ny olona na ny ankohonana sy ny demografika.
Tsy mahagaga, noho izany, fa ny kisarisary maha-olona dia lasa fitaovana afovoan'ny mpivarotra ao amin'ity tontolo vaovao ity.
Izy io dia afaka mampahafantatra ny doka atolotra amin'ny tokantrano nomena amin'ny fahitalavitra mifandray (CTV) ecosystem of broadcast, cable, ary Over-the-Top (OTT) serivisy mivantana. Ny tontolon'ny CTV dia tsy mahazo miditra amin'ny cookies ary zaridaina misy rindrina amin'ny fotony izay ahafahana mamaritra ny tombotsoan'ny mpijery amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ireo angon-drakitra momba ny maha-izy azy ao anaty sary famantarana.
Ny tabilao mombamomba azy dia afaka mitarika dokam-barotra na fandefasan-kafatra hafa amin'ny fitaovana finday misy mpikambana ao an-trano, na doka sy atiny atolotra an'ireo mpampiasa voamarina ao amin'ny tranonkalan'ny marika.
Ny hafainganan'ny fiainana
Miaraka amin'ny karazana fitaovana sy sehatra maro be azon'ny mpanjifa ampiasaina, ny iray amin'ireo olana goavana atrehin'ireo mpivarotra dia ny fandefasana hafatra mifandraika amin'ny fantsom-pifandraisana - saingy manakana ny fahita matetika mba tsy hahatsapa ho voan'ny baomba ny mpijery. Ho fanampin'izay, misy ny olana amin'ny fanomezana ny fiantraikan'ny hafatra na fampielezan-kevitra amin'ny fividianana farany, mba hanombanana ny fahombiazan'ny vola lany amin'ny marketing.
Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia amin'ny fahazoana ny tokantrano na olona amina fitaovana sy amin'ny tontolon'ny tena izy, amin'ny alàlan'ny sary mifandraika amin'ny toetr'andro sy feno. Ny OMNA dia mamela ny marika hiondrana an-tsehatra momba ny mpanjifany sy ny mpitsidika azy ireo ao anatin'ny 24 ora latsaka, mampifanaraka sy manatsara ny piraofilina amin'ny angona OMNA mba hahafantaran'ny marika bebe kokoa ny momba ny vahoaka ao aminy.
Rehefa mihena ny areti-mandringana, dia miresaka tontolo vaovao sy vaovao momba ny mpanjifa izao ny mpivarotra. Kisary famantarana toy ny MONA dia fitaovana ilaina amin'ny fitetezana ny fepetra takiana amin'ny fanondroana sy ny toetoetran'ireo mpanao dokam-barotra ary ny fitakiana mahasoa sy mitaky ny tsiambaratelon'ny mpanjifa, amin'ny hafainganam-pandeha izay manome taratry ny hafainganan'ny fiainana.
Tsindrio eto raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny OMNA
Tags: ajay guptaangona momba ny fitondran-tenatv mifandrayCTVDatatahirin-kevitra demografikakisary famantaranamahalianasary famantarana omnany-ny-tampon'nymividy angonafikasana hividympanentanatombotsoan'ny mpijery
Ahoana ny fomba hanaovana fanadihadiana momba ny mpifaninana amin'ny famaritana ireo vinan'ny fananganana rohy
Fomba fampiasana fivoriana zahana amin'ny firaketana an-tsoratra vahiny vahiny lavitra eo amin'ny podcast-nao amin'ny làlana misaraka